आजदेखि काठमाडौंमा चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज अभियान, कहाँ कहाँ लगाइँदैछ ? – Sandesh Press
May 16, 2021 461
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग भेट गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकभर अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको बेलामा अहिलेको संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा सुझाव लिन मन्त्री आविस्कार केन्द्रमा आएको पुनले जानकारी दिए ।
Nextतीन तले घरको छतबाट ख’से’र एक महिलाको मृ,त्यु